Sidee loo ilaaliyaa nidaamka qaboojinta laptop-ka | Laga soo bilaabo Linux
Sida loo ilaaliyo nidaamka qaboojinta laptop-keena
Charlie-brown | | Lagu taliyay, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Akhrinta faallooyinka labadii meelood ee ugu dambeysay ee asxaabta KZKG ^ Gaara (1 & 2), Dhibaato soo noqnoqota ayaa ka muuqata dad badan oo isticmaala laptop: kululeynta kooxda, taas oo markaa loo aaneeyo Nidaamka Operating system ee ay isticmaalayaan. Khibradeyda shaqsiyadeed, waxaan ku dhiirranayaa inaan kuu xaqiijiyo in sababta ugu weyn ee dambiilaha kululaynta ay tahay xaaladda nidaamka qaboojinta ee processor, wixii ka dambeeya adeegsiga OS gaar ah.
Mararka qaarkood markay ka wada hadlayaan mawduucan dadka qaar oo ay kula taliyaan inay sameeyaan a dayactirka qalabka si ay u helaan waxqabad fiican, badiyaa waxay ku jawaabaan “laakiin taasi waa mid aad u dhib badanTheKuma dhiiran karo, si aan u sameeyo waa inaad noqotaa farsamo yaqaan khibrad leh"ama wax la mid ah. Aniga oo aan kala joogsan qadarinta shaqada farsamayaqaanada ama aan dhihi karin hawl kasta oo la qaban karo qofkasta wuu qaban karaa, hadaan ku dhiiro-geliyo inaan idhaahdo hawlgalkan gaarka ahi waa hawl, marka si taxaddar iyo taxaddar leh loo helo, ay gaadho kuwa garanaya waan soo jeedinayaa, waxaa loogu talagalay dadkaas aan u qorayo tilmaamahan yar si aan uga caawiyo dadaalkooda.
Si aan ku bilaabo, sharaxaad kooban oo ku saabsan waxa nidaamka qaboojiyaha kombuyuutarka gacanta iyo sida uu u shaqeeyo. Sida kiiska kumbuyuutar kasta, laptop-ka wuxuu u baahan yahay kuleyl aad kula xiriirto processor (iyo xaaladaha qaarkood sidoo kale qaar chips iyo / ama GPU) kaas oo loo sii gudbiyo kuleylka ay ka dhashaan walxahaas, kaas oo markaa lagu kala firdhin doono qulqulka hawada ee ay soo saarto marawaxadda u oggolaan doonta heerkulka qalabka inuu ku sii jiro xadka u oggolaanaysa hawlgalka. Waxa ku dhaca laptops-ka ayaa ah, baahida loo qabo naqshadeynta awgeed, cunsuriyadan (kululeeyaha iyo marawaxadaha) wey yar yihiin weligoodna kuma xirna processor, mana awoodaan inay gutaan shaqadooda haddii aysan ku jirin nidaam shaqo oo dhameystiran.
Heatsink. Xaaladdan oo kale waxay ku shaqeysaa processor-ka iyo qayb kale oo ku taal geeska midig ee hoose
Sababtoo ah isugeynta naqshadaha buugga, sida caadiga ah, walxaha faafidda Dhuumaha kuleylka waxay ku yaalliin cidhifyada kore ee qalabka, oo ku dhagan hawo-mareenka hawada ka baxa, halka hawo-mareennada ay hawada qabow ee ka baxsan soo gasho ay inta badan ku hooseeyaan qalabka. Qaybintaan marka laga soo tago way fududahay in lagu soo gabagabeeyo in xannibaadda mid ka mid ah labadan qodob (hawo hawo qabow ama hawo kulul) kululaynta qalabka.
1 Talooyin ku saabsan isticmaalka
2 1- Hesho Buugga Adeegga ee qalabka laga hadlayo
3 2- Xaqiiji in aan haysanno agabkii iyo agabkii loo baahnaa
4 3- Diyaari shaqada
5 4- Ku dhaqaaq hub ka dhigista qalabka
6 5- Is nadiifinta
7 6- mari mariinka kuleylka ah ee cusub
8 7- Dib u ururi qalabka
9 8- Hubso hawlgalka
Dad badan ayaa u muuqda inay isticmaalaan laptop-yadooda iyagoo ku dul dhigaya lugaha, iyagoo dhigaya sariirta, kuraasta kuraasta, barkimooyinka ama meel kasta oo kale oo aan ku raaxeysano, taas oo sababa Nidaamka qaboojinta ee godadka tubbada ayaa xirmay, sidoo kale keenaya in dunta dharka, boodhka, iwm la nuugo. Taasi waxay ku dambayn doontaa inay ku soo ururto baalalka kuleylka ilaa ay ka sameysmaan nooc dareen ah oo gebi ahaanba xannibi doona hawada.
Muuqaalka hoose ee Dell Latitude ATG d630. Iyadoo leh lambar 6 daloolka marinka hawada ee nidaamka qaboojinta
Si taas looga fogaado, waa lagugula talinayaa dhig laptop-ka dusha sare ee siman oo adag, kaas oo noqon kara galaas, gabal alwaax ah ama caag ah, taas oo ka hortageysa xannibaadda godadka aan soo sheegnay, marka lagu daro bixinta dusha sare ee xasiloonida qalabka la dul dhigayo; runti, waxaa suuqa ku jira baakidhyo si loo dhigo laptops ka caawiya qaboojinta, in kastoo aanan taageere u ahayn isticmaalkooda.
Hagaag, markaan guda galno arinta, hadaan go'aansanay inaan ilaalino nidaamka qaboojiyaha laptop, kuwan waa talaabooyinka aasaasiga ah ee ay tahay inaan raacno:
1- Hesho Buugga Adeegga ee qalabka laga hadlayo
Sida caqliga gal u ah in laga fikiro, laptop-yada oo dhami isku mid ma aha nidaamka kala-furfurka ee la raacayo si loo gaaro nidaamka qaboojinta ayaa ku kala duwan kiis kasta, sidaas darteed waxa ugu horeeya marwalba waxay noqon doonaan in la helo Buugga adeegga qalabka aan ilaalinayno. Tan waxaa badanaa lagala soo bixi karaa websaydh soo saaraha laptop ama baaritaanka shabaqa, maadaama sida caadiga ah la heli karo iyadoon dhib badan la qabin.
Tusaalaha ereyada raadinta waxay noqon karaan:
dell + latitude + d630 + »buuga adeegga»
Marka buug-gacmeedka la helo, waa inaan si taxaddar leh u akhrinaa tallaabooyinka la raacayo si loo gaaro nidaamka qaboojiyaha, raadi waxa saxda ah ee ay tahay inaan sameyno talaabo kasta oo aynaan sii wadin ilaa aan si qumman uga qancino inaan si buuxda u fahanay talaabooyinka la qaadayo. Si loo cadeeyo shakiga waxaan isku halleyn karnaa hagayaal ee ka muuqda iFixit iyo videos en Youtube taas oo ku sharxeysa nidaamyadan qalabka aan kala bixinayno ama kuwa kale ee isla soosaarayaasha ah.
Khibradeyda, tani waa mid ka mid ah talaabooyinka ugu muhiimsan iyo yaa hela feejignaan yar, taas oo markaa keenta dhibaatooyin aad u daran; Taladayda, waqtiga aan "ku luminay" talaabadani waxay naga badbaadin doontaa madax xanuun iyo qoomamo dambe.
2- Xaqiiji in aan haysanno agabkii iyo agabkii loo baahnaa
In kastoo ay umuuqato doqonimo, waa inaan hubinaa inaan heysano kaashawiito ku habboon Wixii boolal ah oo qalab ah oo aan kala bixin doonno, nooca iyo cabbirka boolalku waxay ka muuqdaan Buugga Adeegga, laakiin waxaan sidoo kale ku hubin karnaa innagoo isbarbardhigeyna shaandheeyeyaasha iyo boolal. Marka laga hadlayo kombiyuutarada qaar, waxaan u baahanahay xoogaa "khaas ah" shaandheeyeyaal, sida kumbuyuutarrada qaar HP Mid ka mid ah faahfaahinta caawineysa ayaa ah in screwdrivers ay la socdaan caarada magnetized ama ay sii socdaan si ay u magnetize u yeeshaan, taas oo naga caawin doonta inaan ka saarno oo aan dhigno boolal si fudud.
Habka ugu fudud ee lagu magnet karo caarada mashiinka wax lagu buuxiyo ayaa ah adoo xoqaya geeska magnet. Tan waxaan u isticmaali karnaa magnets-ka disk adag oo jaban oo aan horey u kala goynay
Waxa kale waa inaan hubinno inaan haysanno dhalada kulul, taas oo muhiim noqon doonta, maxaa yeelay mar haddii qalabka wax lagu karsado laga saaro, ma awoodno inaan mar kale rakibno haddii aanan mar labaad ku dhejin dusha meelaha xiriirka. Tani waa tallaabo lama taabtaan ah, sidaa darteed haddii aadan haysan koollada kuleylka, xitaa ha ka fikirin inaad bilowdo kala-baxa. Kuwa aan si qoto dheer u aqoon, waa shey si fudud looga heli karo bakhaar kasta oo kumbuyuutar ah oo ku soo bandhiga noocyo kala duwan oo qiimo leh, kuwaas oo badiyaa ay jiraan qiyaaso ugu yar oo leh qiimayaasha qaar oo ku filan. ujeedkii loogu talagalay.
Waxaan sidoo kale u baahanahay xoogaa marooyinka ama gabal ka mid ah maro suuf ah lint-free, iyo sidoo kale a burush jilicsan o burush (labadaba nadiif ah iyo gebi ahaanba qalalan) nadiifinta
Ugu dambeyntii, had iyo jeer way wanaagsan tahay in xoogaa la helo ganaax caarada maadaama ay macquul tahay inaan u baahanahay si aan u maareyno qaar ka mid ah isku xirayaasha yaryar ee aan ka heli doono qalabka.
3- Diyaari shaqada
Tallaabadani waa mid waxtar weyn leh, maxaa yeelay haddii aynaan haysan duruufo wanaagsan oo noo sahlaya inaanu hawsha qabanno oo si habboon isu abaabulno, waxaan isku adkaan karnaa hawl fudud oo fudud; talooyinkaygu waa: leeyihiin a miiska shaqada oo leh a iftiin ku filan, hadday suurogal tahay, ku dabool maro cad, wax ka hayso dhalada weyneyso haddii aynaan haysan "isha gorgorka" ugu dambayntiina, haddii ay suurtagal tahay, ku hay kormeeraha kombuyuutarkayaga ama laptop kale oo agtaada ah si aan ula tashanno Buugga adeegga ama shey kasta oo kale oo aan u baahanahay haddii shaki ku jiro howsha dhexdeeda.
Talada ah in miiska shaqada lagu daboolo maro cad, inkasta oo ay u muuqato wax aan macno ku fadhin xaqiiqda maahan, maadaama maradan ay fulineyso howlo dhowr ah: ka ilaali laptop-ka inuu siibto iyo / ama xoqida miiska, ka hor tag boorarka aan usocono si aan uga saarno rogrogmada, taas oo noo ogolaaneysa inaan dhigno boosaska naga caawinaya inaan aqoonsanno meesha ay ku sugan yihiin qalad la'aan ugu dambeyntiina, inaan yeelano dusha ka soo horjeedka leh midabka boolal iyo qeybaha aan ka saareyno.
4- Ku dhaqaaq hub ka dhigista qalabka
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah barkinta xarkaha y batteriga ka saar qalabka ka dibna riix badhanka korontada dhowr jeer, si loo hubiyo inaysan jirin lacag koronto ah oo ku saabsan qalabka qalabka.
Marnaba bilaabaan kala furfurka qalabka adiga oo aan marka hore ka jarin xeedho oo aad batteriga ka saarto
Hub ka dhigista lafteeda waa in lagu sameeyaa iyadoo la raacayo mid kasta oo ka mid ah talaabooyinka Buugga adeeggaHaddii aan ku dheganaano talaabooyinkan, waa inaanan iska horkeenin dhibaatooyinka. Way fiicantahay in la xasuusnaado, in kasta oo mararka qaarkood ay lagama maarmaan tahay in xoog xoogaa xoog leh xoogaa xoogaa dabaylo ahi ka soo baxaan, haddii marka laga saarayo qayb aan ogaanno iska caabin ka weyn sidii ay ahayd, waa in aynaan sii wadin "qiyaastii" haddii Ma joojinayno oo ma hubineyno inaan raacnay dhammaan tallaabooyinka qaabkii loo dejiyay iyo haddii aan ka qaadnay dhammaan boolal la tilmaamay. Halkan waxaan ku sii wadi karnaa la-tashiga Buugga adeegga ama wixii kale ee ku saabsan. Caadi ahaan dib-u-eegiddani waxay ogaataa qaladka waxayna noo oggolaaneysaa inaan sii wadno. Haddii ay dhibaatadu sii jirto, waxaan joognaa waqtigii aan ka bixi lahayn maxaa yeelay waxaa la doorbidaa inaan ka quusano intii aan sababi lahayn burburka aan gadaal ka qoomameynno, laakiin khibradeyda, haddii aan ka taxaddarno oo aan fiiro gaar ah u yeelano, hub ka dhigis
waxay ku dhaaftaa iyada oo aan dib u dhacyo waaweyn jirin.
Waxay ku jirtaa wejigan shaqada waa inaan ka sii badino abaabulay si ka badan sidii hore, qaab noo fududeynaya in aan aqoonsanno meesha uu ku yaal fur iyo qayb kasta. Xaaladdayda gaarka ah, badiyaa waxaan dhigaa boolal miiska, anigoo raacaya qaab isku mid ah oo ay ku ridayaan qalabka, si marka dib la isugu soo noqdo, loo dhigo isla meeshii ay joogeen. Waxaan ku sameeyaa si lamid ah qaybaha laga saarayo, waa inaan u dhignaa isla nidaamkii aan uga saarnay oo aan miiska saarnaa. In badan oo taxaddar ah oo aan ku qaadanno tallaabadan, ayaa yaraanaya dhibaatooyinka aan la kulmi doonno markii aan laptop-ka dib isugu celinno.
Xaaladaha badankood, mid ka mid ah tallaabooyinka hub ka dhigista ayaa ah ka saar kiiboodhkalaakiin waayo aragnimadayda, badiyaa waa ku filan tahay in si fudud looga saaro meeshiisa iyada oo aan laga jarin cajaladaha ku dhejinaya saxanka, taas oo dhaawici karta haddii marar badan si xun loo maareeyo. Haddii ay dhacdo inaan gebi ahaanba ka jarno, waa inaan daryeel gaar ah siino xirayaashaas.
Goobada, faahfaahinta iskuxiraha xargaha kumbuyuutarka
Tallaabada ugu dambeysa ee kala-goyntu waa in meesha laga saaro marawaxadda iyo kuleylka si loo nadiifiyo labadaba, iyo sidoo kale marinka hawo-gelinta iyo godadkiisa.
5- Is nadiifinta
Iyadoo a maro o maro cudbi jilicsan taas oo aan sii deynin marada, waxaan sii wadaynaa inaan ka saarno haraaga cajiinka kuleylka ee ku jira processor iyo inta hartay ee qaybaha la qaboojiyey, iyo sidoo kale kuleylka. Waa inaan aad uga taxaddarnaa shaqadan, maxaa yeelay waxaan taaban doonnaa qaybo aad u xasaasi ah oo qiimo leh, haddii la dhaawacay, ka dhigaysa qalabkeenna mid aan waxtar lahayn.
Marka la saaro koollada kuleylka ah, waxaan u sii socon doonnaa nadiifinta kuleylka, annaga oo fiiro gaar ah u leh taargooyinka yar-yar ee u qaabeeya hiitarka kuwaas oo ku jira godka bixitaanka ee marinka hawo-mareenka, waxay ku taal taarikada khafiifka ah ee wasakhda badanaa ku soo ururto, mararka qaarkoodna sameysma nooc dareem ah oo ka hortagaya wareegga hawada. Si loo nadiifiyo astaamahan, waxaan isticmaali karnaa a burush jilicsan o burush si taxaddar leh loo maareeyay si aan loo foorarsan ama loo dhaawicin taarikadaas kuwa ah kuwa kala firdhiya kuleylka, una gudbiya hawada wareegaya.
Faahfaahin kale waa in la nadiifiyo marinnada iyo baalalka taageere taas oo dhalisa socodka hawada, tan waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa mid yar burush jilicsan o burush, fiiro gaar ah u leh taageere kuwaas oo aad u jilicsan, sidaa darteed xoog adeegsiga maahan ikhtiyaarSidoo kale isticmaalka aalkolada ama dareeraha kale, maadaama ay ka sii dari karto saliidaha taageerayaasha ayna yareyn karto noloshiisa waxtarka leh ama ay hor istaagi karto howlaheeda.
Qalabka qaar waxay leeyihiin wax lagu duudduubay daloolka hawada ee ku yaal qaybta hoose ee shamiska oo ay ku buuxsamayso boodh, markaa waa inaan si buuxda u nadiifinno si aan uga soo kabanno awoodda ay u leedahay inay hawada ku marto inta ugu badan ee suurtogalka ah.
Mar haddii tan la dhammeeyo, waa inaan si taxaddar leh u nadiifinno waxyaabaha ku dhow kuleylka iyo marawaxadaha, oo mararka qaarkood sidoo kale urursada nijaasta maxaa yeelay waxay ku sugan yihiin waddada socodka hawada.
6- mari mariinka kuleylka ah ee cusub
Marka nadiifintu dhammaato, waxaan u gudbin doonnaa dalab dhalada kulul qaybahaas aan ka saareyno kii hore, ugu yaraan, on processor iyo haddii loo baahdo, dadka kale chips Aniga GPU haddii ay dhacdo in, naqshadeynta, kuleyliyaha uu xiriir la leeyahay qaybaha la sheegay. The qadarka baastada si aad u codsato waa dhibic ah 2 ama 3 milimitir dhexroor ku saabsan qayb kasta. Marka laga hadlayo processor-ka, maadaama uu leeyahay aag ballaaran, waa inuu noqdaa dhig tiro aad u tiro badan ama 4 dhibcood 2 ama 3 mm si siman ayaa loo qaybiyey.
Baastadaani uma baahna kala firdhi, maxaa yeelay taasi waa waxa quusin markii lagu rakibo booska. Intaa waxaa sii dheer way wanaagsan tahay in la caddeeyo in gelinta tiro badan MAYA waxay kumbuyuutarka ka dhigeysaa mid si fiican u shaqeynaya, maadaama uu ku dul daadanayo geesaha processor-ka ama qeybaha, wuxuuna sababi karaa dhibaatooyin ka fog hagaajinta waxqabadka.
7- Dib u ururi qalabka
Tallaabada ugu horreysa ee dib-u-ururintan marwalba waxay noqon doontaa in dib loo dhigo taageere y quusin, Hubinta in marawaxadu si sax ah ugu xiran tahay loox. Dhinaca kale, nidaamka rakibaadda kululaynta waa in si taxaddar leh loo fuliyaa, si dhammaan dusha sare ee la qaboojiyo ay ula xiriiraan. Si tan loo sameeyo, waa inaan ku dhejino meeshiisa oo aan dhigno boolal xajinaya iyada oo la raacayo qaab iskutallaab ah oo aan si adag loo adkeynin illaa inta laga wada dhigayo. Mar alla markii ay dhammaantood meesha yaalliin, mid walba si taxaddar leh ayaan u adkeyn doonnaa iyada oo aan la adeegsanayn xoog xad-dhaaf ah maadaama ay tahay in aan xusuusanno in aan ka shaqeyno waxyaabo xasaasi ah.
Kahor intaadan sii wadin, waa lagama maarmaan u ah in la hubiyo in marawaxadda si sax ah loo rakibay oo ay ku xiran tahay guddiga
Inta hartay ee nidaamka dhismaha kooxda ayaa raaci doona isla tallaabooyinka hub ka dhigista laakiin dhanka kale. Waa inaan fiiro gaar ah siino inaan si sax ah dib isugu xirno dhamaan qeybaha ka go'ay, iyo sidoo kale inaan dhigno fur kasta meeshuu markii hore ku yaalay. Xusuusnow inaadan ku qasbin ama ku dabaqin xoog xad dhaaf talaabadan, maxaa yeelay sida caadiga ah, marka wax aysan ku habooneyn waqtiga ugu horeeya, waa sababta oo ah waxaan sameynay qalad.
Kahor buuxinta tallaabadan, waa inaan si taxaddar leh dib ugu eegnaa miiska shaqada Hubso inaanan haysan dayactir ama boolalHaddii ay taasi dhacdo, tallaabo ayaan ka boodnay ama wax khalad ah ayaan qabannay, marka waa inaan dib ugu laabannaa illaa aan ka gareyno tallaabada aan ka boodnay oo aan saxno qaladka.
8- Hubso hawlgalka
Haddii aan horeyba u helnay illaa hadda, waa waqtigii dib loogu celin lahaa batteriga oo la riixo badhanka awoodda. Waxaan kuu xaqiijin karaa haddii aan si taxaddar leh u dhaafnay oo aanaan ka boodin wax tallaabo ah ama aanan ku qasbin wax ka kooban ama boolal, waxaan haysan doonnaa laptop-ka aan mar kale shaqeyno, markanna "ka qabow" sidii hore ayuu ahaan doonaa oo sidaas ayuu ku sii ahaan doonaa muddo dheer hadaan raacno qawaaniinta. talooyinka loo isticmaalo la siiyaa bilowga maqaalkan.
Xusuusnow tan hage Maaha talis in uu iyaga ka hubiyo wixii fashil ama qalad ah, laakiin haddii ay caawimaad u noqoto kuwa u baahan, sikastoo ay noqotaba, ku dhiirashada qabashada hawshani waa masuuliyad buuxda, laakiin ugu yaraan kiiskeyga, waxay siisaa aniga oo ah qanacsanaan weyn markaan maareeyo inaan si guul leh ku dhameystiro howlaha sidan oo kale ah.
Haddii aad mid leedahay qalabka kulule kululaynta waa wax aad u macquul ah in sababtu tahay dhibaatooyinka isaga oo leh nidaamka qaboojiyaha oo aad ku xallin karto adigoo raacaya nidaamkan, ma dhiirran tahay? Ka dibna, haddii aad leedahay, la wadaag khibrada qof walba, ma ku dhiiran kartaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Lagu taliyay » Sida loo ilaaliyo nidaamka qaboojinta laptop-keena
+100 maqaal aad ufiican
Aad baad u mahadsantahay, waxaan rajaynayaa inay qof caawiso 😉
Aad u faa'iido badan! Aad baad ugu mahadsan tahay maqaalka 😀
Waad ku mahadsantahay joojinta iyo faallooyinkaaga.
Oo sidee ku saabsan isticmaalka mid ka mid ah haamaha wasakhda ah ee hawo ee aad iibiso, waxtar ma leeyihiin? nadiifi oo iska ilaali inaad mar kale kala furfurto, maadaama ay ahayd inaan gabi ahaanba kala furo si aan u gaaro kuleylka mana ahan wax si fudud u sahlanaa, iyadoo la raacayo buugga dayactirka dabcan ...
Uma maleynayo inay shaqeyn doonaan iyaga oo aan kala goyn qalabka, in kastoo laga yaabo inay waxtar leeyihiin nadiifinta qeybihii horey u kala go'ay. Fikradayda, furaha ayaa ah in la raaco talooyinka la isticmaalo oo inta badan ka fogaata baahida loo qabo in la gaaro meesha ay lagama maarmaanka u tahay in la sameeyo nadiifinta noocan ah.
Wax walba waa sax. Midka ku saabsan kumbuyuutarrada desktop-ka ee la ii siiyay rajo la'aan oo nolosha dib ugu soo noqotay nadiifin iyo iibsashada koronto cusub.
+100 loogu talagalay korontada ... waa run in isbadalkan kaliya ay mararka qaar suurtagal tahay in "dib loo soo nooleeyo" qalabkii laga saaray; waxay umuuqataa inay "ku gabanayaan" adeegsiga. LOL
Waad ku mahadsantahay faallooyinka iyo joojinta ...
Maqaal aad u wanaagsan, waxaan badanaa ku sameeyaa PC-yada kumbuyuutarradeyda 3 ama 4 Bilood oo kasta 😀
Talooyin aad u fiican, maxaa yeelay way i caawin doonaan markaan taageero ka helo heerka qalabka haddii aan kala furfuro laptop-ka.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan dhammeystirayaa rakibaadda Office 11 ee Dell Inspiron 3137 2010 labadaba Windows 7 iyo Windows 8 (kadib markii qaab qaab cillad lakabka 8 ah awgeed iyo dambiga UEFI uusan ii oggolaan inaan rakibo Windows 7).
Bilowga sanadka waxaan ku sameeyay dayactirka laptop-ka, waxay ku xirnaan doontaa isaga qiyaastii seddex bilood halkaas waxaan ku isticmaali doonaa talooyinkaaga, maqaal aad u fiican!
Tal Lucas dijo
Casharro aad u fiican, kuleylinta laptop-ka marwalba waa dhibaato. Guud ahaan waxaan isticmaalaa saldhig leh taageerayaal si aan u qaboojiyo qalabka. Xilliga xagaaga farqiga heer kulka ayaa ah mid la ogaan karo.
Ku jawaab UnTalLucas
Haa, waan ogahay saldhigyada leh taageerayaasha, laakiin waxaan arkay in qaar badani qaataan tamarta ay kaga shaqeeyaan laptop USB dekedda ah si ay u yareeyaan waqtiga nolosha batteriga, taas oo ah sababta aanan u jeclayn isticmaalkooda; sikastaba, waa xal sax ah.
Ma aanan ogeyn kuleylka kuleylka markii ugu horeysay ee aan furo pc-ga. Marka markaan daaray marna ma bilaabin, xitaa Bios-ka. Ilaa aan eegay oo aan helay jawaabta.
Waxay ahayd lagama maarmaan in la xuso ka hor inta aanaan taaban wax wareeg ama transistor ah waa inaan ka takhalusnaa wixii koronto ah ee ku hartay gacmaheena. Waxaan tan ku guuleysan karnaa annaga oo taabanna biro xiriir la leh dhulka, ama sidoo kale xirmooyinka jijimmada ah ee ay u iibiyaan ujeeddadaas. 😉
Waad ku saxan tahay waxa ugu horeeya, markasta sii daa korantada ma guurtada ah ka hor inta aadan taaban wax walboo ah, taasi waa faahfaahin aan si joogto ah u ilaaway inaan xuso, sababta aan u hilmaamayo ayaa ah halkaan ku noolahay (Cuba), qoyaanka jawigu marwalba wuu sarreeyaa ka sarreysa 60%), markaa aad ayey u adag tahay korontada ma guurtada ah inay urursato; Sikastaba xaalku ha noqdee, aad baad ugu mahadsantahay sida waqtiga saxda ah ee signalada ah iyo inaad istaagtayba.
Waad salaaman tihiin, waxaan ahay farsamayaqaan kumbuyuutar iyo kaaba ahaan waxaad sharaxaad ka bixisaan (taas oo ah habka aad u dhameystiran) Waxaan u arkaa inay lama huraan tahay in la muujiyo qodobbada qaar ee adeegsade kasta oo isku daya inuu sameeyo shaqadan oo kale ay tahay inuu ilaaliyo, maahan waxay u egtahay wax soo noqnoqda, laakiin sababtoo ah runti aad ayey muhiim u tahay:
1 MAR WALBA shaqada offline; taasi waa, bilaa batari iyo fiilada AC oo go'ay. Ka saarida gacmahaaga adigoo taabanaya dusha sare ee birta waa ka hortag aan dhaawaceynin.
2. Isku day inaad taxaddar samayso marka aad furaysid laptop-ka, iska ilaali jajabka hana ku khaldin boolal qaar iyo kuwa kale. Khiyaano fudud oo lagu ogaan karo halka fiiq ka yimaado ayaa ah in lagu duubo cajalad warqad ah oo ku xigta godka uu ka yimid.
3. Haddii aanad khibrad u lahayn ama suurtogalnimada inaad isticmaasho kombaresar hawleed, isticmaal hawo qasacadaysan oo qasacadaysan, oo lagu iibiyo dukaamada qalabka iyo xitaa dukaamada waaweyn. Xusuusnow inay tahay inaad isku daydo inaad wasakhda ka saarto, oo aadan ku cadaadin wareegyada.
4. Haddii haddii nadiifinta taageerayaasha ka dib, ay sameeyaan sawaxan dhib leh, beddel iyaga oo aan libiqsanayn. Taageerada rasmiga ah ee nooca laptop-kaaga ah ayaa lagu helaa. Ha isku dayin inaad saliid ku sameysid usha ama aadan saliid ku darin, wareegga marawaxadu wuxuu ku faafin karaa saliida wareegyada gudaha.
5. Had iyo jeer isticmaal magaca calaamadda kuleylka kuleylka ah. Noocyada wanaagsan waa Arctic silver 5, meeris Master Master fusion xad dhaaf ah, xalalka Gelid, Prolimatech, iwm. Markaad ka shakisan tahay midka la adeegsanayo, had iyo jeer way fiicantahay in la waydiiyo saaxiib xad dhaaf ah (mid ka mid ah kuwa xiisaha leh ee ku qasbaya CPUs inay helaan waxqabad badan).
PS: iyo inaad magnetize ka dhigto shaandheeyeyaasha adoo ku xoqaya birlabta, waxay shaqeysaa oo keliya haddii aad ku xoqdo mid ka mid ah uloheeda oo keliya, ma ahan magnetka oo dhan.
Jawaab Luis Montes
Waad salaaman tahay Luis, aad baad ugu mahadsan tahay sharaxaaddaada, xaalada barta 2 waxay umuuqataa fikrad aad u wanaagsan, waxaan u maleynayaa in hada kadib aan bilaabi doono inaan ku dhaqmo. Marka laga hadlayo qodobka 4 aad aad ayaad u saxantahay, isku dayga inaad dufanto taageere waxay noqon kartaa isha dhibaatooyinka waaweyn, waxaa lagugula talinayaa inaad bedesho markasta oo ay suurta gal tahay. Marka laga hadlayo arrinta ku saabsan astaanta diirimaadka kuleylka, illaa iyo hadda waxaan isticmaalay dhowr ka mid ah xaaladdooduna ma aanan dareemin kala duwanaansho la taaban karo, si kasta oo ay tahay, xaddidaaddu waa mid sax ah illaa iyo inta aan ka suurta galno inaan doorano; waxa dhaca ayaa ah in mararka qaar ikhtiyaarkaasi aanu si fudud u jirin.
Aad baad ugu mahadsantahay faalladaada iyo joojinta ...
Maqaal aad u weyn! Hambalyo, Charlie!
Aad baad ugu mahadsantahay ammaantaada Pablo, waxaan kaliya isku dayaa inaan la socdo waxa lagu daabacay bogga. Habsiin adiga…
Shayga ugu fiican! Aad baad ugu mahadsantahay inaad sharraxaad ka bixiso wax kasta oo faahfaahin ah oo aad u fahmi karto dadka bini-aadamka ah!
Waxaan u maleynayaa in marar badan aan ka cabaneyno kuleylka kombiyuutarradeena ay iska dhiibaan iyadoo aan si cad loo cadeynin sababta kuleylkaas. Waxaan ku leenahay sariirta, sagxadaha aan hawo fiicnayn iyo marawaxada leh kabax kafiican qabriga Tutankhamun.
Markaan kari karo waan ku dhaqmi doonaa. Aad baad u mahadsantahay!
Waad ku mahadsan tahay Tesla, taasi waa sababta saxda ah ee aan xoogga u saaray talooyinka loo isticmaalo; Haddii aan qaadno taxaddarro macquul ah, waxaan iska ilaalin doonnaa inaan si joogto ah u fulino dayactirkan.
Waxaan ku darayaa, in loogu talagalay qaboojinta ugu fiican, haddii ay dhacdo inay bixiso dhibaatooyin qaboojinta, sida ay ugu dhacdo Dell XPS M1530, waxaan ku dalbanayaa saxan naxaas ah oo sifiican loo safeeyey iyo dhumucda lacagta qadaadiic ah saddexda chipset ee ay ku leedahay kiiskan. Sidoo kale, koollada kuleylka ah ee u dhexeeya iyaga iyo kululeeyaha.
Qodob kale, in kasta oo ay tani horeba uga sii darnayd, ayaa ah in la gooyo khadka dareemayaasha ee marawaxadda, si markaa marawaxadu u buuxdo markay daaran tahay. Ugu dambeyntiina, ka qaad isbuunyada ay keeneyso ama shaandhada hawada ee laptop-yada badankood keenaan, iyadoo hawada kulul ay ka soo baxeyso mid aad u raaxo badan sidaa darteed, heerkulku sidoo kale wax badan ayuu hoos u dhici doonaa.
Waa inaan dhahaa, sameyntaas, waxaan ka dhigay kombiyuutarkan inuu hoos uga soo dego 80 digrii ilaa 40 digrii oo aan dhib lahayn, halkaasna wuu ku nagaanayaa. Kaliya waxay ku kacdaa kiisaska markaan isku dayo emulator aad u xoog badan, sida MAME oo leh ciyaar culus ama markaan soo uruuriyo xarkaha, laakiin guud ahaan, taageeraha ayaa had iyo jeer ku jira shaqo la’aan, heer kulka ayaa ka badan sidii la iigu aqbali lahaa wax ka yar 45 darajo oo leh jawiga jawiga. 30-wax.
Waad ku mahadsan tahay faallooyinka NauTiluS, laakiin ugu yaraan kuma dhicin inaan ku dhiirrigeliyo qofna inuu gaaro tallaabooyin aad u daran sida jarista xariijinta dareeraha heerkulka, badiyaa waa ku filan tahay in wax laga beddelo marawaxadaha u shaqeynaya ee BIOS. Dhinaca kale, "isbuunyo" aad sheegaysid, inta aan ogahay, MA AHA isbuunyo ama qayb ka mid ah qalabka, waa si fudud nooc ka mid ah dareemmo ay sameysay isku-imaatinka dharka dharka, iwm. marka laga baxo marinka hawo-mareenka, sidaan ku xusay maqaalka, markaa markasta oo aan aragno wax sidaas oo kale ah, waxaa lagama maarmaan ah in meesha laga saaro iyadoo qayb ka ah nadaafadda.
Runtii ... isbuunku waa timo iyo marada is uruursaday in marka lagu daro tan waxaan nafteyda u ogolaanayaa faallo yar ... waxaan kugula talinayaa inaan leenahay ilays inta ugu macquulsan ee goobta shaqada ... tan maxaa yeelay marar badan markaan kala baxno laptop waxaa jira waxyaabo aan loo arkeynin in si fudud loo arko ... marka lagu daro tan haddii ay suurta gal tahay in la dhigo kaamiro dijitaal ah si loo duubo waxaad sameyneyso sidoo kale waa lagu talinayaa .. marka hadhow hadhow isticmaaluhu ma xasuusto sida ama meeshii ay wax ka socdaan, fiidiyowgu wuu ka caawin karaa isaga ... marka lagu daro faallooyinkaaga ku saabsan adeegsiga waxbaan xaddidayaa ... tiro badan oo ka mid ah guuldarrooyinka ku jira laptop-ka ayaa sabab u ah qaabab aan habboonayn oo loo adeegsado ... taas oo isticmaalaha xitaa ka warqabin of ... oo waxay noqon kartaa mowduuc boosto dheeraad ah
Ku jawaab rdelnogal
Xaqiiqdii, waxba isbuunyo ... wasakh saafi ah. Sida nalalka, waa lama huraan, haddii kale shaqo badan ayaan qaadan doonnaa oo waxaan ku dambayn doonnaa is-qabqabsi. Fikradda ah duubista habka fiidiyowga ayaa aniga ila muuqata, sidoo kale waxay noqon kartaa mid waxtar leh in sawirro laga qaado tallaabo kasta oo sidaas awgeedna loo helo hage muuqaal ah wixii su'aalo ah. Waan kugu raacsanahay in waxyaabo badan oo lafilayo in kumbuyuutarrada gacanta lagu qaato ay sabab u tahay adeegsi aan habboonayn, markaa horay u soco oo qor qoraal mawduuca naftaada ah, xusuusnow in tabarucaadka la soo dhaweynayo.
In yar oo kombuyuutarrada gacanta ahi waxay leeyihiin shaandhe "isbuunyo" ah, oo wasakh maaha, ilmaha ha ka waalin. Sida tusaale ahaan Acer Aspire.
Jawaab Fco Javier
Ciise Israel Perales Martinez dijo
Marka ugu horeysa ee aad kala furto laptop-kaaga, marwalba waxaa jira boolal haray ama taabashada taabashada ayaa joojineysa hajahjajh xD, laakiin waa run meesha uu marawaxadu kujirto, qadar farabadan oo caano ah, boodh, iwm.
Jawaab ku sii Ciise Israel Perales Martinez
Waa run in boodhka iyo marada ay keenaan kuleyl sidaa darteedna uu gaabis ku yimaado kumbuyuutarka iyo marar badan oo amaanka ah, laptops-yada ayaa iska demiya si looga fogaado waxyeelo soo gaarta wareegyadooda.
Waana sababtaas tan ay muhiim u tahay in la fuliyo nadiifinta jirka ee qalabka, WAALIDIINA WAAN SOO TALINAYAA IN LAGA HELO MAAMULKA KA HORTAGA, laakiin dad badan ayaa iska indhatiraya digniintaan, maadaama adeeggan ay kumbuyuutarradu ku jiraan xaalado wanaagsan.
Oo siday halkaas ku dhahaan waxaa ka wanaagsan in laga badbaado intii laga xumahay hehehehe.
Waxaa tifaftiray Admin: Laba ka mid ah faallooyinka aad soo dirtay waxaad ka kooban tahay xiriiriyeyaal dhiirrigelin ah oo ku socda bartaada. Boggan adiga looguma talagalin inaad naftaada kor u qaaddo. Waxaan rajeynayaa inaad fahantay.
Qodobka 20 aad ee wanaagsan!
Waxaan marwalba isweydiinayay sababta ay laptop-kaygu uga buuq badan yahay baabuurka wadada weyn, hadda waan ogahay, maqaal aad u fiican, waxaan isku dayi doonaa inaan ku dhaqmo, si aan u arko inta boolal ee ii hartay. : p
Sii, buugayga xusuus-qorka ah waqti ka hor, waxay ahayd 80 digrii iyadoo aan gebi ahaanba waxba la qaban, waxaan u maleynayay in isha ay ka soo burqato ama dhibaatooyinka ka dhasha kuleylka kuleylka ah (Waxaan u diray farsamayaqaankii, ma aanan dooneynin inaan kala furfuro maxaa yeelay markii ugu dambeysay ee aan kala furfuro buug yar kadib ma aanan sameynin Waan awooday inaan dib isugu soo celiyo xD hahaha), ninku wuxuu markii hore moodayay inay layaab tahay waxa ku dhacay, wuxuu u maleeyay in isha laga helayo aysan siinaynin danab sax ah, usbuuc ayay isiiyaan oo waxay ii sheegaan intaanan bixin kahor, inaan isku dayo, maxaa yeelay way nadiifiyeen waxwalba (wasakh badan buu lahaa) mishiinkuna wuxuu bilaabay inuu sifiican ushaqeeyo, ilaa heer uu ninku igu dhaho iskuday usbuuc ama labo hadii wax walboo hagaagaan, aniga isii, maxaa yeelay runtu waxay tahay ma aanan qaban "wax" kaliya waan nadiifinay, waa sida ay tahay hadda waxaan qorayaa tan (cajiib ah):
[x11tete11x @ Jarvis ~] $ dareemayaal
Adabbaraha: Qalabka aaladda
temp1: + 49.0 ° C (crit = + 96.0 ° C)
Id jimicsi 0: + 50.0 ° C (sare = + 86.0 ° C, crit = + 100.0 ° C)
Aruur 0: + 50.0 ° C (sare = + 86.0 ° C, crit = + 100.0 ° C)
Aruur 1: + 43.0 ° C (sare = + 86.0 ° C, crit = + 100.0 ° C)
Aruur 2: + 50.0 ° C (sare = + 86.0 ° C, crit = + 100.0 ° C)
Aruur 3: + 47.0 ° C (sare = + 86.0 ° C, crit = + 100.0 ° C)
tem1: + 50.0 ° C
[x11tete11x @ Jarvis ~] $ waqtigeeda
22:04:28 ilaa 22:48, 3 isticmaale, iskucelcelis xamuul ah: 0,44, 0,46, 0,48
* Waxaan siiyaa iimaan aan doonayay inaan qoro xD
HAHAHA… Waxaan ka werwersanahay farsamayaqaankaas oo markii uu kala daadinayo buugaagta xusuus-qorka ah ay dhibaato ka haysato inuu dib isugu soo celiyo .. HAHAHA ma siin doono si uu u hagaajiyo xitaa meel laga baxo… Waxaan rajaynayaa inaad u gudbiso isku xidhka qoraalkan «farsamo-yaqaanadaada», HAHAHAHA ...
Aniga oo dib ula socda faallooyinkeyga, waxaan si xun u muujiyey xD, halista aniga ayaa ah xD, waxaan horey u kala diray buug xusuus qor ah oo aanan dib u jeclaan karin, taasi waa sababta aan ugu diray farsamayaqaan (anigoo ka helay taageerada rasmiga ah ee buugayga xD) hahahahaha
Maqaal aad u fiican. Waad ku mahadsan tahay maqaalkaaga, waxaan ku dhiirraday in aan nadiifiyo buuggeyga 100% (Samsung R480) iibso koollada iyo cabitaanno nadiifin ah si looga saaro caagga kuleylka ah ee ay qaybodu u lahaayeen (ArctiCleans Thermal Material Remover) ka dibna ku dheji koollada kuleylka ah (Arctic MX-2) ). Isbedelka ayaa isla markiiba la ogaan karaa, haddii ay iyaga ka caawiso iyaga fog, waxa ugu adag ayaa ahaa mawduuca kumbuyuutarka, tan iyo markii ay midowgu aad ugu nugul yahay isku xirayaasha, laakiin waan ku guuleystay :) Nidaamkaygu imminka ma kululaado soooooooooooooooooooo !!!, laakiin waa wax ay leeyihiin buugaagtii hore ee Samsung Notebook, sidaa darteed waa inaad iyaga la noolaataa. Laakiin sida cad nadaafaddu wax badan bay u adeegtay. Waan ku faraxsanahay qoraalkaaga markale waana ku dhiirraday !!!, Had iyo jeer waa kan ugu fiican !!
Waad salaaman tahay Sebastian, aad ayaan ugu faraxsanahay in maqaalkan uu kuu adeegay lagana dhiiri galin doono inaad ilaaliso buugaaga xusuus qorka, sidoo kalena aad la wadaagto khibradaada bulshada, taas oo wax noo wada taraysa; ugu yaraan wuxuu kaliya ii sheegayaa in ay jiraan alaabooyin lagu nadiifiyo dhalada kuleylka. Sida laptop-kii hore ee Samsung, waa run inay xoogaa "kulul yihiin" laakiin sikastaba xaalku ha ahaadee, dayactirku had iyo jeer waa waxtar.
Waad ku mahadsantahay joojinta iyo wadaagida khibradaada ...
Waa salaaman tahay Sebastian. Waan ogahay faallooyinkaaga muddo laba sano ah, laakiin waxaan isku dayayaa inaan kala furfuro Samsung R480 oo aanan haysan buugga adeegga. Haddii aad aragto arjigan, ma i caawin kartaa? Mahadsanid!
Waxaan ahay Paquito dijo
Laptop-ka aan haysto wuxuu jiraa in ka badan 10 sano markasta oo aan daarana waa inaan sugaa 15 daqiiqo oo kale si ay u kululaato. Waxay leedahay dayactir, laakiin dhibaatada lama xalin.
Marka waxaan haystaa laptop-ka xoogaa dheer.
Jawaab Soy Paquito
Ku rakib hingaadda iyo naxwaha saxeexa LibreOffice / OpenOffice
Jadwalka barnaamijka ee Gambas3 iyo Sqlite3: Talaabo talaabo.